အသစ်ခုနစ်ခု LEGO စူပါမာရီယို 2021 သို့၎င်းတို့၏လမ်း stomp
01 / 01 / 2021 31 / 12 / 2020 အာဒံ Basch 2060 Views စာ0မှတ်ချက် 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ, 71381 Chain Chomp တောတွင်းကြုံတွေ့တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71382 Piranha Plant Puzzling Challenge တိုးချဲ့ခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း, 71383 Wiggler ၏အဆိပ် Swamp တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71384 Penguini Mario ပါဝါ Up-Pack ကို, 71385 Tanooki Mario ပါဝါ Up-Pack ကို, 71386 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 2, Lego, Lego စူပါမာရီယို
Lego စူပါမာရီယို အသစ်က set ကိုဖြန့်ချိတဲ့အကွာအဝေးအတွက်လတ်ဆတ်တဲ့စွန့်စားမှုအပေါ်ထွက် ဦး တည်နေသည်။
2021 အသစ်ရရှိနိုင်ပါသည်၏ဒီရေလှိုင်းအပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည် Lego ကြီးမားတဲ့ themes များခင်းကျင်းဖြတ်ပြီးစုံ။ Lego စူပါမာရီယို ခုနစျပါးနှင့်အတူအဓိကအဆင့်မြှင့်လက်ခံရရှိသည် အသစ်အစုံ တိုးချဲ့အထုပ်များ, ပါဝါ -up, ဝတ်စုံနှင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေဇာတ်ကောင်အိတ်ဖုံးလွှမ်း။
တိုးချဲ့မှုအသစ်သုံးခုသည်မာရီယိုအား Soda Jungle သို့နက်ရှိုင်းစွာရောက်ရှိစေပြီးထိုတွင်အဆိပ်အတောက်ရှိသောခရမ်းရောင်ရေနှင့်များစွာသောအိမ်များရှိသည် classic လူဆိုးလူဆိုးတို့သည်သူ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်။ စောင့်နေကြ၏။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကမာရီယိုအားနှောင့်ယှက်ခဲ့သည့်အထင်ကရ Chain Chomp သည်နောက်ဆုံးတွင်သူ၏အုတ်ခဲပြုပြင်မှုကိုရရှိခဲ့သည် 71381 Chain Chomp တောတွင်းတှေ့ဆုံ သတ်မှတ်မည် အစောပိုင်းသုံးသပ်သူများကအသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြသည် ချည် Chomp တောတွင်းတှေ့ဆုံ, Piranha Plant ပဟေlingိစိန်ခေါ်မှု နှင့် Wiggler ၏အဆိပ်ရွှင်လန်း.
သငျသညျသစ်ကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေးထွက်စစ်ဆေးနိုင်သည် Lego စူပါမာရီယို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link များအနှံ့ဖြန့်ချိ:
71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ
71381 Chain Chomp တောတွင်းတှေ့ဆုံ
71382 Piranha Plant ပဟေlingိစိန်ခေါ်မှု
71383 Wiggler ရဲ့အဆိပ်ရွှံ့ညွန်
71384 Penguini Mario ပါဝါ Up-Pack ကို
71385 Tanooki Mario ပါဝါ Up-Pack ကို
71386 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 2
ကျွန်တော်တို့၏ မာစတာစာရင်း ကနေအသစ်ကလွှတ်ပေးအားလုံးဖုံးလွှမ်း Lego Star Wars, CITY, Creator နှင့်အခြားအခင်းအကျင်းများ။ သင်အဲဒါကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
← အသစ် LEGO ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှုလွှတ်တင်
LEGO 10278 ရဲစခန်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သောအချက်ငါးချက် →